Informative Print Media – Umsamo Institute
HomeInformative Print Media
Informative Print Media
Ukuhlawula akhusho ukuthi shintsha isibongo ubize uyihlo
Engosini eyedlule ngakhuluma ngezinto okufanele sizibheke uma sifuna unyaka u-2018 usihambele kahle ulethe nezinhlanhla. Engisola ukuthi kwagqama kwathinta abaningi yinkulumo yesibongo ngoba baningi abashaya izingcingo abanye bafika esigodlweni eMlambomunye befuna ukucaciselwa ngesibongo. Ephephandabeni langomhla-16 kwephezulu kubhale insizwa yakwaBhengu, uNtuthuko, ebeka eyakhe imibuzo noMichael Mkhize naye ephawula ngesibongo. Ngithe namhlanje angiphendule uNgcolosi noKhabazela nabaningi ababuza ngalolu daba. Ekuphenduleni kwami ngizoqala ngokuthi isibongo siwuMsamo wakho, konke oyikho, ngalokho uma konakele sona kuyefana nokuthi ukhona ungekho. Encwadini uMsamo noDengezi ngiyaveza izinhlobo zokuzaleka kwabantu nokuthi uma uzaleke ngalolu hlobo isibongo siduka kuphi nendawo na nokuthi kuqondiswe kanjani lapho konakele khona. Indaba yami angiyiqale kanje: abantu ababili okungumama nobaba uma bethandana bese benquma ukuthathana ngokuba yindoda nomfazi, bagcagcelane ngokwesintu, leyo ngane ibiza isibongo sikababa. Lapha ngizogcizelela umshado wesintu, ngoba lapho kushadwe ngomshado wesilungu kwangagcagcwa leyo ngane isesembangweni, ngoba umama akazange athelwe ngenyongo emzini, ngakho leyo ngane kusefana nokuthi eyakubo kamama. Nakhu-ke umama uyagcagca kodwa athi egcagca sekukhona ingane abese nayo ayithole engakagcagci, kokunye agcagce esezithwele, leyo ngane kufanele ukuthi ukuze kuphelele isibongo sayo, ikhishwe nonina ngembuzi ngamhlazane unina egcagciswa bese kubo kababa yenzelwa isiko lwesiphandla noma imbeleko.
Indlala mayingenzi siphikise okufunwa yidlozi
Kungenzeka ukuthi uke uzibuze esikhathini samanje ukuthi ngabe basekhona yini ogobela kumbe izinhlanya eziseneqiniso njengasemandulo. Sekukaningi uthola ukuthi sekwakhiwa imali ngabantu umuntu ebe engenalo ulwazi oluphelele. Omunye
uthola ukuthi idlozi lakhe alikakabi sesimeni sokusebenza kodwa usejaha ukuthi izinto zenzeke bese eyaxhamazela.
Kukhona abantu abakhonjwayo kuthiwe abahambe bayofuna uhlanya olusendaweni ethize basho negama ngoba sebebonile abanikazi bomsebenzi nabadinga usizo ukuthi kulapho bezoluthola khona kanye nempande abayidingayo. Kodwa inkinga uthola
ukuthi umuntu oyalelwa kanjalo uthi esahamba eduka ebuza indlela azithele kugobela kumbe uhlanya oluzomedusa luthi “hhayi mina ngingakwenzela lokho.” Kungakho-ke namhlanje sewubona umsebenzi wedlozi uqhubeka ubukeleka phansi.
VVO Mkhize: Ukubethela nokulungisa umsamo sekwenziwe ihlaya
Ziningi izinto esizenzayo zesintu sibe singaqondi ukuthi sizenzelani. Iningi lazo sizenza ngoba siye kozwa ohlanyeni kumbe esangomeni, kuthiwe asikwenze sixakekile sinezinkinga kodwa ungachazelwa, uze ukwenze. Ngizobala izinto ezinhlanu, engizobhekisa kuzona. Ukubethela, indiki, ukugeza izidalwa, ukulungisa umsamo nokwembula.
Cishe akekho umuntu ongathi akakaze athi eyohlola angatshelwa okunye kwalezi zinto. Ekuhloleni izona okwelashwa ngazo. Ukubethela: Cishe awukho umuzi ongabetheliwe. Kulokho kubethela uma ubuza ukuthi kwenziwelani, kuzothiwa kulunguliswa
izinto ezonakele, kokunye kuqiniswa umuzi. Umuzi kakadeni kwakufanele uqiniswe emandulo kodwa kwakunesizathu futhi kunezinyanga zekhethelo ezabe zabelwe lowo msebenzi, kungewona umsebenzi kanoma ngubani. Kwakuba ngabantu besilisa
ababethela ngokunikwa lezo zikhwama zokubethela, owesifazane engalinge enze lowo msebenzi.
Ramaphosa’s failure to acknowledge role of sangomas in Covid-19 fight
President Cyril Ramaphosa shunned ancient African healing knowledge, African medicine and traditional healers when he addressed the nation on the escalation of measures to combat the Covid-19 coronavirus pandemic.
However, in the same breath he sent out a statement mourning the passing of iSanusi Mkhulu Credo Mutwa.
It would be comic had it not been hypocritical and gravely ironic that an African head of state from the governing ANC, which has no history of being led by a non-African, consulted with every sector of society except the traditional
healers, but felt it necessary to express his “sorrow” that one of our own, Mkhulu Mutwa, had passed on.